Sidee wax noqon karaan haddii Hindiya iyo Bakistaan isku garaacaan nukliyeer - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Sidee wax noqon karaan haddii Hindiya iyo Bakistaan isku garaacaan nukliyeer
Raiisal wasaaraha xagjirka ah ee Hindiya oo kuraas badan Ku helay xasuuqa muslimiinta Hindiya ayaa maalmahan Ku hanjabay inuu weecin doono webiyada gala Bakistaan oo marhore laga heshiiyay in aan la taaban. Wuxuu leeyahay biyaha galaya Bakistaan waxa u baahan beeralayda gobolada xadka saaran.
Wuxuu cunaqabatayn xun iyo kufsi Ku hayaa muslimiinta ku nool Kashmiir oo ilaa hadda Ku jira bandoo. Wuxuu hore u xasuuqay muslimiinta gobolka Gujraat oo isagu Ka ahaa badhasaab kuna barakicisay kumanaan Muslimiina.
Waxay xagjirada hunuuda ah ee sanamka iyo xoolaha caabuda ee isaga taageeraa burburiyaan dhamaan astaamaha muslimiinta Hindiya sida masaajida kana dhigtaan meel ay dhoobo Ku caabudaan.
Haddaba inkastoo Bakistaan Ku tilmaantey talaabada xagjir Moodi ee biyaha mid Ka baxsan heshiisyadii hore waxa la is weydiin karaa maxay Ka qaban kartaa haddii sanam caabud Moodi leexiyo webiyadaas.
Dabcan waxa jira heshiis hore oo la Oran jirey heshiiska webiyada Indus ee 1960 oo aan weligii la jebin xataa ayadoo labada wadan dagaal Ku galeen gobolka Kashmiir.
Heshiiskaas ayaa leh Bakistaana waxay xaq u leedahay sadexda webi ee lagu magacaabo Indus, Jeelam iyo Jinaab halka Hindiya iyadna xaq u leedahay webiyada Raafi, Baas iyo Sutlej oo dhamaantooda magacyo sanam laakiin wax Ka yar boqolkiiba 5 ayaa gala Bakistaan.
Haddaba maxaa dhacaya haddii nukliyeer la adeegsado
Dadka indha indheeya halista hubkaas ayaa leh waxa marka ugu horeeya Ku dhinanaya dad lagu qiyaasay 125 milyan oo ah sadex meelood Laba meelood tirada dadka Bakistaan Ku nool.
Inta soo hadha waxa dilaya wasakhda hubkaas Ka tagey ayadoo ayna jiri doonin cunto la cuno iyo dhul la beeran karo dadkuna u dhiman doonaan gaajo, waxa Ka sii daran in aan lagu noolaan Karin wadamada Ka agdhow labadaasi dal oo sunta hubkaas soo gaari doonto.
Sifeynta dhulkaas ama ciida haddii nolol laga eego ayaa qaadan doonta ugu yaraan 30 sanno waaba haddii la is yiraa Ku noolaadee. Waxayna qasbaysaa in wixii Ka badbaada ay Ka qaxaan dhulkaas oo raadsadaan wadamo qaabila.
Su’aasha waxay noqonaysaa mar haddii arini sidaas tahay waxa labada wadan u furan inay ka fogaadaan inay is tirtiraan, dadka kalana galaaftaan maadaama dagaal caadiya ayna waxba Ku Kala qaadeyn oo Bakistaan awoodo inay Iska celiso Hindiya.